SSD Data Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado xogta SSD
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado SSD Data
Maxaad samayn kabashada SSD?
Dad badan ayaa isticmaalaya SSD disk ay technology ammaan oo aad u adag. Wax kasta, oo dadka isticmaala computer weli loo qaybin karaa laba qaybood, kuwa Khasaariyey xogta, iyo kuwa kale oo lumin doonaa xogta. Marka xogta la tirtiray, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale, meesha degan xogta la kaliya sida "heli karo si isticmaalin" calaamadeeyay, u sheegay in nidaamka files cusub ayaa la soo kaydin karaa. Si aad u soo kabsado xogta ka SSD disk / card , waxa soo horeeya ee aad maskaxdaada si ay u joojiyaan waa adiga oo isticmaaleya isticmaale SSD hadda oo aad weydiisan kartaa caawimaad ka barnaamij soo kabashada SSD.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta SSD?
Si aad u soo kabsado files SSD, waxa kale oo aad u muhiim ah in aad doorato xirfadle ah oo waxtar leh soo kabashada software xogta SSD . Halkan waxaan u Khushuucdo Dartiis soo jeedin Wondershare Data Recovery ama Wondershare kabashada Data u Mac u isticmaala Mac, an soo kabashada files SSD fududahay in la isticmaalo, laakiin xoog badan. Waxa ay taageertaa dib u soo kabashada ee videos, photos, music, waraaqaha, emails, archives oo dheeraad ah oo la tirtiro, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale oo ka wadid aad SSD.
Fiiro gaar ah: Ha dajiyo barnaamij ku saabsan meesha aad ku badiyay xogta aad, haddii aad overwrite aad files lumay.
No arrinta ayaad isticmaalaysaa Wondershare Data Recovery ee Windows ama Mac, waxa kaliya ee aad u qaadataa 3 tallaabo inuu ka soo kabsado aad SSD, shaqo cad oo fudud socda sida soo socota.
Tallaabada 1. Ku rakib oo haw soo kabashada SSD on your computer. Dooro Recovery ee File lumay haddii aad isticmaalayso Windows version ah, ama Recovery tirtiray File haddii version Mac.
Tallaabada 2. Dooro wadid aad SSD oo guji si scan.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh natiijada iskaanka ah si loo hubiyo tayada faylasha. Markaas hubiyo kuwa aad doonaysid in aad ka soo kabsado SSD disk oo guji inuu ka soo kabsado.
Taasi waa. Your badiyay xogta SSD ayaa la helay. Si uu u tixgeliyo ammaanka, inaad si fiican u badbaadin lahaa faylasha kabsaday on disk kale halkii disk SSD ah, si loo hubiyo in aad sii wadi karo inuu ka soo kabsado xogta bidix adiga oo aan dib ugu heli weli.
Video tutorial soo kabashada SSD
Waa maxay SSD?
SSD, gaaban drive ay adag-state, waa qalab lagu kaydiyo xogta isticmaalaya xasuusta adag-state in uu kaydiyo xogta joogta ah. Waxay bixisaa qaab ka xoogbadan, waxay isticmaashaa xoog yar, waddaa aamusnaan, koobaya waqtiga helitaanka iyo ka badan yahay oo adkaysi u nixin badan caadi drives adag, iyo furfuraya dhibaatada caqabadaha jirka iyadoo la bedelayo drives disk adag la circuitry xawaare sare. Halkii disk ku noqnoqosho leh, a disk adke isticmaalaa chips xasuusta (caadi ahaan DDR RAM ama Flash Memory) akhriska iyo qoraalka xogta.